Watermelon Red Crystal Yakagadzirwa Dombo 100g 1-3cm, Kumba Kushongedza zvicherwa, Aquarium Dombo 16,25€
10 Piece Unisex Tsvuku Thread Bracelet yevakaroora uye Shamwari Rombo Charm Tsvuku uye Nhema Tambo Zvipo Zvine Trendy Yakagadzirwa nemaoko Zvishongo 10,75€
Yoiumit - Stainless Simbi Cuff Zvishongo zveVakadzi, Inochinjika Leather Zvishongo 33,67€ - 35,27€
ALLYES Literal Pearl Bracelet ine Metallic Beads, Matete Mabhendi, Boho Izwi, Multilayer, Yakafukidzwa Yakawedzerwa, Vakadzi Zvishongo, 2020 17,36€
Go2Boho - Maparera emvura choker chishongo chevakadzi, versicolor jewelry, bhuku rengano, obol 31,48€
Bijourypalace 100% Ingori 925 Sterling Sirivhi Yakakombama Wand Necklace Tsoka Yekutsikisa Belcher Wyvern Magavhuna Singapore Kuputira Fence Necklace Vakadzi 17,78€ - 18,63€
kugashira / hushamwari zvishongo (Boho)
hushamwari zvishongo (boho)
Bracelet tsitsi kiyi yekubatanidza tsvimbo yehupenyu, simbi
16,89€ - 17,41€ Sarudzo dzesarudzo
Cold Charms Bracelet Pile Iwo Anofadza Vakarovera 2 emiti / compendium rubble bracelet ine chisimba Bead Bracelets Vakadzi Vakadzi Rombo Wish Matombo
11,46€ - 11,74€ Sarudzo dzesarudzo
2 madhiramu Fervor Commiseration Charm Bracelet Lapel vakadzi Mweya Mweya Inobhadharwa Wishes Sweet Fortune Africa Tambo Bracelet Attachment Relief Sets
11,22€ - 11,34€ Sarudzo dzesarudzo
Kwaya yemachinjika anogadziriswa mumoyo wakarongedzwa wemukadzi uye nymph, zvishongo zvemaitiro, kusununguka kwekisimusi, yakajeka chirevo
12,06€ Sarudzo dzesarudzo
Kuchenesa zvishongo, mwedzi, nyeredzi, girandole, pendant, inodzoserwa tambo, bangle, gri-gri, zvishongo zvekubatanidza, kutumira kushandiswa
11,45€ - 11,95€ Sarudzo dzesarudzo
8mm yechisikigo ferret bracelet yevarume, vane mavara ekuona mabheji, akajairwa mapakeji, matombo ekuberekwa, emutongi
8,73€ Sarudzo dzesarudzo
Vintage Zuva Bracelet, Yakagadzirwa Nenyaya Nhoroondo Akorti, Zuva Rekuteterera Pendant, Anodakadza Pair Bracelet, Break Drawing
11,27€ - 11,73€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Multicolor Tibetan Buddhist Zvishongo zveVakadzi neVarume, Akanyatsojeka Mafundo, Macrame Trélingage, Fetish Bracelet
12,41€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Tibetan talisman zvishongo, buddhist bubble, yevakadzi nevarume, rakasungwa bhuku, talisman aripo
12,29€ Wedzera ngoro
AMIU - Akatetepa Tibetan Zvishongo zveVakadzi, Buddhist Saizi, Ruoko Akasungwa Mapfundo, Bubble, Scarlet Lusin, Premium
12,12€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - chiTibetan simbi waya yesimbi yevarume nevakadzi, sirivheri mhete, amulet, dzakagadzirwa nemaoko cataclysm
16,46€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Nyasha Lapis Dombo Zvishongo, 3mm, Tibetan Dombo Mhete, Flexible Bracelet, yeVarume neVakadzi, Yoga Chakra Spar Beads
18,42€ Wedzera ngoro
AMIU - Tibetan Buddhist zvishongo zvevarume nevakadzi, chaiwo mapfundo, African lanyard, talisman strenna
AMIU - Varume veBhudha Vakarukwa Kotoni Thread Chingoro, Sirivha Mapfundo, Akanyatso kuvezwa Akasikwa Kokonati Dander Mabhero
AMIU - Akasiyana-siyana Tibetan Buddhist Zvishongo zveVarume neVakadzi, Tibetan Passion, Akanyatsojeka mafundo, Fetish Buddha Thread
17,99€ Wedzera ngoro
AMIU-10mm Natural Frosted Beads Bracelet, yeVarume neVakadzi, Eurythmy Kukumbira, Kukumbira, Natural Dombo Mabheji, Yoga Chakra
AMIU - Mavara mazhinji eTibetan Buddhist Zvishongo zveVakadzi neVarume, Book Knots, Tibetan Cord, Mascot Bracelet
AMIU - zvishongo zveBuddhist, solitaire talisman, yakashongedzwa, chiTibetan, yevakadzi nevarume, echisungo mapfundo, Deongare tambo, mutsa wekuverengera
AMIU - Tibetan Buddhist zvishongo zvevakadzi nevarume, bhuku mapfundo, tambo tsvuku, Krisimasi iripo
12,12€ Wedzera ngoro
AMIU-Tibetan Buddhist zvishongo, fetish, knotted book knot, Deongare, Christmas strenna, yevakadzi nevarume
AMIU Matombo Mabheji Tibetan Dombo Mabheji Malleable Bracelet yeVarume Vakadzi Yoga Chakra Glass Bead Bracelets
17,56€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Multi-colour Tibetan gri-gri bracelet yevarume nevakadzi, Buddhist trinket, kuzvipira, akagadzirwa nemaoko
AMIU-Tibetan madota bracelet gri-gri, zvishongo zveTibetan, mapfundo akagadzirwa bhuku, apoplectic leash, zvipo al-gri-gri
AMIU - Tibetan Natural Stone Bracelet yeVarume neVakadzi, 3mm Mabheji, Soft Spar, Yoga Chakra Beads
AMIU - Akasiyana-siyana Tibetan Buddhist Bracelets, Cord Beads, Fetish, Akanyatsojeka mafundo, eVakadzi neVarume, 3 MaJoko
18,09€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Tibetan Buddhist Vajra Bracelet, Earthy Mhangura Query Cockroach, Natural coconut Spiral Beads, Abridged Chiitiko Bracelet yeVarume neVakadzi.
AMIU - Yakapfupikiswa Grelin Tibetan Zvishongo, Buddhist Zvishongo, zveVakadzi neVarume, 3 Bhariri
15,72€ Wedzera ngoro
AMIU-Tibetan Buddhist Bracelets, jecha, revakadzi nevarume, vane akapfupiswa mafundo, panguva yeKisimusi kunaka, mascot
13,25€ Wedzera ngoro
AMIU - Buddhist Tsaona Gauntlet Bracelet neKotoni Yakarukwa Mapfundo eVarume, Natural Bodhi Beads Tibetan Bone, Talisman
AMIU - Tibetan Buddhist zvishongo zvevakadzi nevarume, dzakagadzirwa nemaoko, rosette lanyard, Kirisimasi sevhisi.
AMIU - Varume veTibetan Buddhist Mhete Yemuchato Bead Bracelet, Yakagadzirwa Tale Mantra, Swarthy Knot, Archaic Nickel Fetish
18,79€ Wedzera ngoro
AMIU - Tibetan pearl bracelet, tale bhuku, vachiimba nhume, Buddhist, Mantra, dondo gadget, masango sanders
AMIU - Tibetan talisman bracelets, chokwadi chaicho, Buddhist, yevakadzi nevarume, nhema tambo, grigri knot, rudo, Tibetan rakarukwa bracelet
AMIU - Tibetan gri-gri Buddhist zvishongo zvevakadzi nevarume, zvakapfupiswa mafundo, verdant lanyard, chidhori, chakakura
12,39€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Buddhist uye Tibetan talisman zvishongo zvevakadzi nevarume, nemaoko akagadzirwa nemaoko, denderedzwa dema tambo yakasvibirira, yakagadzirirwa strenna
12,46€ Wedzera ngoro
AMIU - Tibetan Buddhist Zvishongo zveVakadzi neVarume, Maoko Akagadzirwa Nemaoko, Verdant Tambo, Kisimusi Charity, Talisman
AMIU - chiTibetan chakagadzirwa nemaoko bracelet, isinganzwisisike tambo isina mvura, tambo-gri-tambo, yevakadzi nevarume, macrame
16,71€ Wedzera ngoro
AMIU - Fetish Buddhist bracelet yevarume kana vakadzi, yakarukwa yakatambanudzwa uye yayo Tibetan Buddha relic, dextral chiitiko chishongo, inogona kupfekwa pane hinji
16,25€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Tibetan Buddhist mascot zvishongo zvakagadzirwa bhuku, 6 handlebars, yevakadzi nevarume, lusin knots, gri-gri, zororo, Tibetan rakarukwa bracelet
13,39€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Natural matombo talisman bracelet, gumi nemaviri enyeredzi, Inotsanangurwa, inogadziriswa marozari, Hollywood spar, whimsical
15,63€ Wedzera ngoro
AMIU - zvishongo zveTibetan zvevarume nevakadzi, 41 murazvo, kuyemura kweTibetan Buddhist, mawoko akagadzirwa nemaoko
AMIU - Tibetan Yakagadzirwa nemaoko Lusin Bracelets, Buddhist Zvishongo, zvevakadzi neVarume, 3 Kegs
AMIU - zvishongo zveTibetan zveBuddhist, zvevakadzi nevarume, reruoko runyorwa runyorwa, nhema nhema tambo, rusununguko rweKisimusi
AMIU - Tibetan Buddhist zvishongo zvevakadzi nevarume, chaiwo mapfundo, sango rose tambo, Kisimusi chipo
AMIU - Tibetan amulet bracelet, buddhist phylactery, tsvuku mapfundo, yevakadzi nevarume, trélingage yakaitwa bhuku, obol amulet
14,10€ Wedzera ngoro
AMIU - Tibetan enumeration bead bracelet, kunyatsoitika, mu warren nyasha, mu spruce chimiro, kubva kuTibetan Buddhist Mantra
17,78€ Wedzera ngoro
AMIU - Tibetan Buddhist zvishongo zvevakadzi nevarume, dzakagadzirwa nemaoko tambo, netambo, zororo reKisimusi
AMIU - Kotoni tambo yesongo yevakadzi nevarume, Tibetan mhangura mhangura, gri-gri tambo
16,56€ Wedzera ngoro
AMIU - Tibetan Natural Coconut Twist Bracelet, Buddhist Beads, Vajra Chip, Yakapera Mhangura Inokumbira Clarine, Chinoitika Chinyorwa, cheVarume neVakadzi.
AMIU - Natural Stone Fetish Chakra Bracelet, 7 Signet, Yakadzika, Inogadziriswa Marozari, Isiri pamutemo Girazi, Yakatsauka Instance Bracelets
AMIU - Mavara mazhinji eTibetan evarume nevakadzi, matatu mabharani, kuzvipira kweBuddhist, mapfundo akagadzirwa kubva mubhuku
Tibetan Buddhist Droplet AMIU ye3 Mureza Kumwisa Kuderedza Kuderedzwa kweTibetan Zvishongo & Diki Rakaringana Rondedzero Amulet yeVakadzi neVarume
16,15€ Sarudzo dzesarudzo
AMIU - Tibetan Buddhist amulet dzakarukwa zvishongo, 2 tinettes, zvevakadzi nevarume, chaiwo mapfundo, lanyard kumedza, sevhisi yegodo
AMIU - Tibetan amulet bracelets evarume nevakadzi, anoera Buddhist, rakasungwa bhuku, yakatsvuka shinda, alms amulet
13,39€ Wedzera ngoro
AMIU - Chishongo chakabatana mumatombo ehuswa chaiwo, maparera anogadziriswa, akachekwa zvisiri pamutemo, muimbi, mascot mukubatsira
AMIU - Yakanakisa chiuno bhandi, ngano yakagadzirwa nemaoko, knot, yakasungirirwa tambo yechisimbiso, gri-gri leash, yevakadzi nevarume, macrame zororo
AMIU - Tibetan Buddhist gri-gri bracelets dzakarukwa muTibet zvevakadzi nevarume, manyore mapfundo, chewing link, rusununguko rwetariro, matatu muids
AMIU - zvishongo zveTibetan mu grelin, goridhe fardant, Buddhist, yevakadzi nevarume, akagadzirwa nemaoko
AMIU - Tibetan Buddhist zvishongo zvevakadzi nevarume, chaiwo mapfundo, ane simba tambo, zororo
AMIU - Tibetan Buddhist gri-gri rakarukwa satini zvishongo, zvevakadzi nevarume, mabhuku mapfundo, grelin Deongare, akamirira zororo
12,29€ Sarudzo dzesarudzo
Iko kune chero chinhu chiri nani pane yakasarudzika hushamwari bracelet? Handifunge kudaro.
Boho hushamwari zvishongo zvinowanzo gadzira mifananidzo yemuzhizha musasa uye sleepover zvirongwa kwandiri. Iyo yechinyakare yakagadzirirwa chipo chipo pamwe neyakanaka nzira yekushandisa yako husimbe yezhizha manheru. Chikamu chakanakisa nezvekugadzira hushamwari zvishongo netambo ndechekuti chinhu chikuru chekutandarira kune chero munhu.
Zvishongo zvehukama: zvinobva kupi?
Aya ma "boho" bracelets ekushongedza akambogadzirwa nevanhu vezvizvarwa zveCentral neSouth America. Mutsika yacho ine kuti rundarira rwakaputirwa paruoko rweshamwari iyo ingangoda chimwe chinhu panguva iyoyo. Rundarira runofanira kupfekwa kusvika rwanyatsopera uye rwuchizouya rwoga, uyezve chishuwo chinofanira kuzadzikiswa.
Nekutarisa zvakanyanya, hushamwari hwedu bracelet magadzirirwo anokudzidzisa iwe maitiro ekugadzira zvishongo zvine zigzags, Chinese manera mapfundo, herringbone, mabraids, twists uye akasiyana mamwe mapatani. Mamwe akakodzera kune vanotanga kana vechidiki, nepo mamwe acho akanaka kune avo vane chinzvimbo chakanyanya kana kuda kuvaka hwakaomarara hushamwari bracelet.
Kugadzira hushamwari zvishongo zviri nyore-kudzidza-DIY zano revana pamusasa wezhizha, asi nekushongedzwa kushoma kwaisazotarisa kunze kwenzvimbo paruoko rwevakuru. Zvese zvaunoda ndezvishoma zvigadzirwa, kunyanya embroidery floss mumarudzi akasiyana, pini yekuchengetedza kana tepi yekuchengetedza tambo munzvimbo. place, uye chero mabhatani, marozari, kana mazango aunoda kusungirira kumagumo. Iwe uchawana yakapusa modhi.
Ushamwari zvishongo zvinowanzo gadzirwa kubva pakushongedza micheka, asi rairo idzi dzinokuratidza maitiro ekugadzira zvishongo kubva kune tambo, tambo yeganda, zvimedu zvejira, nezvimwe zvinhu zvisina kujairika. Kune zvakare nzira dzinoverengeka dzekuvashongedza nezvinhu zvakadai semasvosve uye kunyangwe rhinestones.
Iwe unogona kungoita kanomwe tambo yehukama hushamwari. Mirayiridzo inoratidza kushandisa zvakare inogadziriswa repurasitiki chivharo chekutevera emplacewako wemazino floss. Naizvozvo, munhu wese achazoda kupfeka inoyevedza hushamwari bracelet.
Hushamwari bracelet mune chimiro cheChina chinera iyo inoshandura pakati pematatu mavara. Iyi imwe nzira yakanaka kune mumwe munhu asina kujaira kugadzira zvishongo. Iyo yakashongedzwa yakawedzerwa kumicheto miviri isati yaputirwa pachiuno chiuno chiratidzo cheiyi modhi. Mhedzisiro yacho yakachena uye inonakidza kupera.
Kushandisa tambo yeganda panzvimbo yekushongedza floss ndeimwe sarudzo yekupfekedza hushamwari hwako zvishongo. Iyi tambo ina yakakomberedza kuruka patani iyo inogona kushandiswa kugadzira yakasarudzika kana yakafanana ruvara rundarira. Iwe zvakare uchawana vhidhiyo kuti ikubatsire iwe kugadzira yako modhi.
Izvo zvishongo zvinogadzirwa nemaviri chete akareruka macrame mapfundo. Ichi chidzidzo chinoratidza maitiro ekugadzira mapatani senge mitsetse, chevron, uye mangoda. Iwe zvakare uchawana mazano ekuti ungapedzisa sei hushamwari hwako bracelets kuti uite kuti vataridzike zvakanyanya kusiyanisa.
Yeye bracelet modhi iyo inoshandisa chimwe chinhu kunze kwemazino floss. Kuchengeta matambo ese, iyi inoshandisa shinda isingadhuri uye kadhibhodhi disc. Iyi yakajeka jellyfish bracelet iyo inokodzera vanhu veese mazera. Chingave chikuru chirimo musasa chirongwa kana chinonakidza chiitiko chekurara.
Idzi dzakasarudzika hushamwari zvishongo zvinogadzirwa uchishandisa mubiki twine kuti uwane maviri-toni kutaridzika iyo inokuyeuchidza iwe nezve zuva pagungwa. Sezvo iyo twine yakatosungwa nemavara maviri patambo imwe neimwe, hafu yebasa yatove kuitirwa iwe. Yekukurumidza kuruka uye yekusarudza banga inopa inokurumidza kupera chigadzirwa chaunogona kupfeka ipapo ipapo.